Man City oo guul ay u qalantay ka soo heshay Wolves… (Kevin De Bruyne oo AFARLEEY ka kacay) – Gool FM
Man City oo guul ay u qalantay ka soo heshay Wolves… (Kevin De Bruyne oo AFARLEEY ka kacay)
Dajiye May 11, 2022
(Wolves) 11 Maajo 2022. Manchester City ayaa saddexda dhibcood ka soo qaadatay kooxda Wolves oo ay booqatay, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-5, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-3 ay ku hoggaamineysay kooxda Manchester City.
Daqiiqadii 7-aad Manchester City ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay laacibkooda khadka dhexe ee Kevin De Bruyne, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay Bernardo Silva.
Laakiin daqiiqadii 11-aad kooxda Wolves ayaa dhalisay goolka barbardhaca kaddib markii uu 1-1 ka dhigay laacibkooda Leander Dendoncker waxaana ka caawiyay Pedro Neto.
16 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Kevin De Bruyne ayaa wuxuu dheesha ka dhigay 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda Manchester City.
Kevin De Bruyne oo ay caawin kaga timid saaxiibkiis Raheem Sterling ayaa dhaliyay goolkiisa saddexaad ee ciyaarta, wuxuuna dheesha ka dhigay 0-3 ay ku hoggaamineysay Manchester City
Daqiiqadii 60-aad Manchester City ayaa dheereysatay hoggaaminta ciyaarta waxaana 1-4 ka dhigay Kevin De Bruyne oo kulankan bandhig il qaban leh ka sameeyay.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 1-5 ay kaga soo adkaatay Manchester City, kooxda Wolves oo ay booqatay, City ayaa kaddib guushaan ay gaartay waxay ku hoggaamineysaa horyaalka Premier League 3 dhibcood naddiif ah, waxayna leedahay 89 dhibcood.
Chelsea oo guul kaga soo heshay garoonka Elland Road 10 xiddig oo kooxda Leeds United ah
Inter Milan oo ku guuleysatay Coppa Italia kaddib markii ay ka adkaatay Juventus